Umthandazo kuSanta Muerte ukuze acinge ngam. ? Iiyure ezingama-24
Umthandazo kuKufa okungcwele ukuba ucinge ngam kukunikezela ilungelo kule Ngcwele ukufaka ubudlelwane bethu ukusinika uncedo esiludingayo.
Kufuneka iqatshelwe into yokuba lo ngumthandazo ongenziwanga kwimeko yamaqabane angaphambili kodwa unokwenziwa ngawo onke amaxesha ukufumana lo mntu asigcine kwiingcinga zawo ngalo lonke ixesha.
Ngumthandazo onamandla ekufuneka siwenze ngononophelo kuba iziphumo ziyamangalisa kwaye zinokuqatshelwa ukusukela oko sayekayo ukwenza umthandazo.
1 Umthandazo kuKufa okungcwele ukuba ucinge ngam
1.1 Ndingawenza nini umthandazo wokufa okungcwele ukuba ucinge ngam?
1.2 Ngaba umthandazo uyasebenza ngokukhawuleza?
1.3 Uyintoni lo mthandazo?
Ndilahlekile, ndingenanjongo, ndingenasibindi kwaye ndingenalo uthando.
Ndilahlekile ndiziva, kodwa ndinethemba lokufumana. Njengoko ndikhala kuwe, ukholo lwam luyavuseleleka.
Ndiza kuwe kuba ndifuna ukubuyisela ubuntu bam. Ndihambe kwiindlela ezimnyama, ndafumanisa ukuba iyagweba ithamsanqa lam.
Izikhathi ezenze ukuba ndiwe kwaye nangona bendivukile, namhlanje ndimi emhlabeni ngaphandle kokuma.
Usikelelekile ukufa, Ndibabale, Ndikhoyo.
Ukufa okusikelelekileyo kundibuyisele kwimeko yobomi, yigqibe le nto iyihafu.
Usikelelekile, usike imixokelelwane endibopha kwaye undibuyisele amaphiko endenze ukuba ndibhabhe.
Kuphela kuwe ndiyathemba, kuwe kuphela ndithandaza, kuphela ndifuna ukuba ululame.
Ndibuyisele umendo wobomi, apho amehlo am anokukubona ukukhanya.
Apho iindlebe zam zimamele umculo kwaye ulusu lwam luva kukubamba komoya okuhamba nam.
Ndibuyise, ndibuyise ukuba andifuni ukuya kude. Ndifuna ukubuyela ebomini.
Ndiyazi ukuba uyandimamela, ndiyakucela, utshintshe ubomi bam, ndiyakuthembisa (ndenza isithembiso) ndiyabulela ngalonto.
Yiyo umthandazo ovela entliziyweni Ewe, amaxesha ngamaxesha omnye wabantu ababandakanyeka kubudlelwane unokuziva ngathi akonelanga ...
Izinto azihambi ngendlela ebefanele ukuba okanye ngayo ezinye ipetroli zifunekayo kwaye kulapho ikhoyo umthandazo Siba sesona sixhobo sinamandla sinokubakho.
Ndingawenza nini umthandazo wokufa okungcwele ukuba ucinge ngam?
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba ungathandaza nini?
Nanini na siva isidingo Singawenza lo mthandazo ngokuzola nangokuzithemba.
Nokuba siphi na, kuthatha kuphela ukholo kunye nomphefumlo.
Ayinamsebenzi imini okanye ixesha. Into ebalulekileyo kukuba nokholo.
Ngaba umthandazo uyasebenza ngokukhawuleza?
Imithandazo ngokwayo ayinalo ixesha elithile ukuba iphendulwe kodwa ngeli xesha kukho amawakawaka amakholwa aqinisekisa ukuba imithandazo ephakamisa uKufa okuNgcwele iphendulwa ngexeshana nje elifutshane.
Oku kungaxhomekeka kwizinto ezininzi ezinjengokholo okanye ubungqingqwa bemfuno enqamlezileyo, nangona kunjalo kunzima ukuqinisekisa into enjalo, ke kufuneka sikholelwe ukuba iintshukumo ziphendulwa ngexesha elifanelekileyo, hayi ngaphambi okanye emva.
Umthandazo wokucinga ngam uyakhonza ubekhona kwiingcinga zomnye umntu.
Ingasetyenziswa kuzo zonke iimeko ezinokuvela kwaye nakulwalamano olungenanto yakwenza nothando.
Ngumthandazo onamandla ekufuneka wenziwe ngoxanduva kuba kufuneka ube nenjongo okanye injongo yokufezekisa kuba akufuneki sigcine nje iingcinga zomnye umntu xa singakhange sicwangcise into esizakuyenza ngokulandelayo.
Ihlala ikhula kumandla emthandazweni yokuKufa okungcwele ukuba ucinge ngam.
Umthandazo wokufa oNgcwele ngenxa yothando olungenakwenzeka